Tengesa kana kumirira pamusika wemusika? | Ehupfumi Zvemari
Mukushanda kwemusika wemasheya, hazvisi chete zvakakosha kuti uverenge mabhenefiti ayo mabasa anogona kuunza. Kana zvisiri, pane zvinopesana, zvakakosha kwazvo kuziva kuti ungatengesa sei panguva chaiyo. Uku kufamba kuchanyanya kunoenderana ne kubudirira kwekushanda mumisika yemari. Nekuti pamwe iwe unoziva kuti zvinoenderana nekutengesa kwakanaka pamusika wemasheya, mutsauko wemamiriyoni mazhinji unogona kuvimba nekushanda. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti kutengesa kwakanyanya kukosha kupfuura kutenga.
Panguva chaiyo iyo mari inowanikwa ichatanga kuoneka pane mari dzakaitwa, zvakajairika kuti uzvibvunze kana chiri icho mamiriro akakodzera kutengesa kana zvinopesana zvirinani kumirira kuti mabhenefiti awedzere kukura. Kuti usarudze imwe kana imwe nzira, zvichave zvakafanira kuti iwe wakambojekesa zvimwe zvinangwa mukushanda mumusika wemasheya. Ivo vanogona kutungamirwa zvinoenderana nematemu ekusingaperi kwavanonangidzirwa uye kunyangwe zvichienderana nemari yakapihwa. Ma parameter ese ari maviri anokupa mhinduro kune aya akakosha nzira dzekudyara.
Ehezve, pane mamiriro ezvinhu apo chinonzwisisika chinhu chekuita kubata mari yekudyara kudzamara wawana mitengo iri nani mukoteshiti yayo. Kana zvirinani kudzamara zviratidzo zvaratidza izvo kuti inguva yekugadzirisa zvigaro mumari yemari yakadyarwa. Nekuti pane njodzi yakakomba iyo mitengo inogona kudonha mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva uye nenzira iyi zviwanikwa zvese zvakaunganidzwa kusvikira zvino zvatsvuka. Nekurasikirwa kunotevera mune yako chirevo chemari.
1 Nguva yekutengesa?
2 Gadza zvimwe zvinangwa mumusika wemasheya
3 Ganhurira kurongeka
4 Mari yekuita mashandiro
5 Mutero kurapwa kwekushanda
Usati wapindura uyu mubvunzo wakakosha mumusika wemasheya zvine musoro kufunga kuti iwe unofanirwa kusarudza zano rekudyara rinosanganisa kuchengetedzeka nenjodzi. Pamusoro pazvose kuchengetedza capital, asi zvakare kuyedza kusimudzira mhedzisiro yemabasa ako mumisika yemari. Nekuti zvinogona kunge zviri izvo dambudziko rekuti kana zvirinani zvamuka tengesa nehurema kana kuenda zvakadzika mukati mazvo uye ita kuti kurasikirwa kwako kuwedzere kutaurwa. Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu ayo vese vashoma uye vepakati varimari vanoedza kudzivirira pamusoro peimwe nzira mukushanda.
Kune rimwe divi, chokwadi chekutengesa mumabhegi hachifanirwe kunge chiri chinhu chechokwadi, asi zvinopesana chinofanirwa kunge chiri chigadzirwa chekuronga kwakaringana. Kunze kwekunge aripo mutengo unokwira zvakanyanya kwazvo, asi panguva imwechete isingatarisirwi. Ipapo unogona kuita iyi sarudzo kuchengetedza zvaunofarira iwe pachako. Kunyangwe chiri chinhu chaunofanirwa kujekesa zvichibva pane dzimwe nzira mu investments uye kuti chive chinhu chisiri nyore sekufunga kwako kusvikira zvino. Naizvozvo, iwe unofanirwa kufungisisa pane ino yakakodzera chikamu mukutengesa pamusika wemasheya.
Gadza zvimwe zvinangwa mumusika wemasheya
Chekutanga pane zvese, zvinokurudzirwa kuti uzvigadzirire zvinangwa zvinogona kufungidzirwa zvakakwana. Mune zvimwe zviitiko inogona kuve 5%, mune vamwe 7% uye kusvika pa10% kana kunyangwe na kukwira zvakanyanya. Kubva nemaonero aya, hazvina kunaka zvachose kumisikidza zvinangwa zvisina kunyanya kukosheswa kana zvichibva pane zvishoma-zvakavakirwa ruzivo kana kusavimbika kunoisa zvidzoreso zvinopfuura 30% kana 40%. Kunze kwekuti iyo mari inonangidzirwa kune yakareba nguva.
Kune rimwe divi, kana purofiti yapinda, kunyangwe iri diki zvakadii, panogara paine muyedzo wekuvhara nzvimbo kuti utore mari inowanikwa. Sarudzo yekupedzisira inoenderana zvakanyanya nematanho anotungamirwa nemari dzako mumisika yemari. Mumamiriro akasimba kusagadzikana kwemari kana musika wemasheya inogona kunge iri sarudzo yakanak kuita. Kunyangwe mune zvisina kwazvakarerekera kana zviitiko zvepamusoro zvinogona kuve kukanganisa kukuru kuvhara nzvimbo nekukurumidza. Mune ino kesi, zvinokurudzirwa kurega mabhenefiti achimhanya kudzamara zvinangwa zvakagadzwa zvazadzikiswa, kana zvikadaro.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo muchikamu chino ndiyo poindi yekureva kuti kukutadzisa kuita kutengesa panguva yakakodzera kunogona kukuunzira dambudziko rinopfuura rimwe chete. Mupfungwa iyi, imwe yematanho anoshanda kwazvo inobva kune izvo zviri maodha kubva rega kurasikirwa, zvichienderana nekurasikirwa uko vatengesi vangangofungidzira. Kwete zvisina maturo, izvi zvinokuita iwe kuti avo vakaremara havagone kuwedzerwa mune yako mari chirevo. Kusvikira pakuita kuti iwe ufungisise chete kurasikirwa kwaunogona kufungidzira mukutengesa mumisika yemari. Uye zvakare, ivo havazokubhadharira iwe imwechete euro mukutarisira kwayo sezvo iri yemahara zvachose.
Pane mamwe matanho ekushanda, mamiriro ezvinhu anokura uko, nekuda kwekutya zvakanyanya njodzi, iwe unogona kanzura mashandiro izvo zvine simba rakasimba rekukoshesa. Neiyi nzira, iwe unenge uchingoita kuita kunobatsira mashandiro pamusika wemasheya zvakaderera zvakanyanya mazinga. Kuziva kuti iwe unogona kuwana zvimwe zvakawanda kubva mukufamba. Uku ndiko kumwe kwekukanganisa kwakanyanya kunoitwa nevashambadzi vasina kudzidza kwakanyanya mumisika yequity uye nekudaro iwe unofanirwa kudzivirira kuzviita kubva ikozvino zvichienda mberi.
Mari yekuita mashandiro
Chero zvazvingaitika, hazvizombokukuvadza iwe kutevedzera mamwe matipi akareruka ekuita kuti yako midziyo ibatsire uye uzive nzira yekutengesa panguva yakakodzera. Muzviitiko zvakawanda iwe unozopihwa kwauri nekushanduka kwemisika yemari pachayo, asi kune vamwe uchafanirwa kuzvimisikidza pazivo inofungidzirwa mukushanda kwakapfuura. Kwemakore, usakahadzika kuti iwe uchavandudza iyi nzira kusvika iwe wasvika kune imwe misoro yekukwana izvo pasina mubvunzo zvichakushamisa iwe kubva zvino zvichienda mberi. Nemazano anotevera atinokufumura pazasi.
Usatengesa, kwete zvishoma kana zvachose, mune zvakajeka zviitiko zvekusimudzira zvemisika yemari. Kwete pasina, iwe unenge uchishayikwa yakakura kwazvo mukana wekukura uye kuti haufanire kutambisa pasi chero mamiriro ezvinhu. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti kuongororwa kunogona kuenderera mberi muzvikamu zvinotevera.
Enda uchiongorora kana ma maximums ari mitengo yavo iri kudzikira sezvo chiri chiratidzo chechokwadi chekuti kukwikwidza kwako kuri kupera. Uye saka iwe unogona kutofunga nezve kutengesa masheya kuti unakirwe nezvibereko zvakawanikwa kusvika parizvino.
Pose vamwe zvinangwa zvine musoro Icho chirongwa chakanakisa chekuzadzisa magumo mune yako investa. Nekuti neiyi nzira, iwe unenge uine zvirinyore nyore kuziva kuti ndeupi mutengo wedanho kwaunofanirwa kugadzirisa zvigaro mumisika yemaketi. Uye zvakare, kuburikidza nesarudzo iri nyore kwazvo yekuita kubva zvino zvichienda mberi.
Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi imwe yenguva dzakakodzera kwazvo kutengesa masheya, iwe une imwe isingawanzo kutadza. Izvo ndezvekutsvaga kana iyo kutengesa kumanikidza iri nani kumutengi. Chichava chiratidzo chinoshanda kwazvo kuti ubve panzvimbo dzawakambovhura.
Imwe kiyi yekubudirira mumusika wemasheya iri muchokwadi icho icho usanyanya kukara. Hongu kwete nekuti zviri nani kuwana mari shoma pane kusiiwa nemhedzisiro yakaipa mukushanda. Mumusika wemasheya pane chirevo chinoreva "kuti euro yekupedzisira inotorwa nemumwe muzvinabhizimusi." Iwe unogona kunyorera zano iri kuti uzive maitiro ekutengesa masheya panguva yakakodzera.
Kune rimwe divi, zvichave zvakare zvinobatsira kwazvo izvo kuverenga mutengo wekushanda. Zvese kana zvasvika pakutenga nekutengesa. Zvekuti nenzira iyi iwe unenge uine parutivi mambure purofiti yekushanda mumusika wemasheya uye kwete chete zvakakomba. Kunyangwe kutora mukana pazvipo zvakawanda zvinopihwa nemasangano emari kuti ushande pamusika wemasheya.
Mutero kurapwa kwekushanda
Chekupedzisira, haufanire kukanganwa iyo mari ichaenda kubhadhara yako Zvisungo zvemari uye izvo zvinokanganikwa nechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Mupfungwa iyi, pachave nemari iyo yaunofanirwa kuzivisa mune yako inotevera mari chirevo uye izvo zvichawedzerwa kumakomisheni ezvese mashandiro mumisika yemari. Vanogona kupa mubhadharo wepakati pe0,25% uye 1,00% pamari yakadyarwa uye izvo zvinoita kuti kufamba kwese kwaunoita mumisika yezvemari kudhure. Nekubvisa kwako, hapana mubvunzo kuti iwe unozogona kuona iyo yechokwadi purofiti yemari.
Zvichienderana nemutengo wekutengesa wezvikamu, mutsauko mukuita kumwe chete kunogona kuve kwakanyanya kwazvo. Nekusiyana kweanosvika makumi maviri muzana kana kunyangwe neyakawedzera simba. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekugadzirisa mutengo wekutengesa zvakanyanya sezvinobvira uye nekuvandudza purofiti yeimwe yeaya mashandiro. Ndiyo kiyi yekuzadzisa zvinangwa zvako uye pamusoro pedzimwe nzira dzehunyanzvi. Nekudaro, kufamba uku kunoda kuti vamwe vadzidze kuzviita nekubudirira. Chero zvazvingaitika, haufanire kutengesa zvikamu zvako pamutengo wemusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Tengesa kana kumirira pamusika wemusika?